MB 2018 September - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ဂျေ Tkach ကနေန်ထမ်းပေးစာ > MB 2018 စက်တင်ဘာလ
ပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သူ သို့မဟုတ် သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်ရက်ကို တွက်ချက်နိုင်သည့်သူ အမြဲရှိလိမ့်မည်။ Nostradamus ၏ပရောဖက်ပြုချက်များကို Torah နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဟုပြောနိုင်သောရဗ္ဗိတစ်ဦး၏အကောင့်တစ်ခုကိုမကြာသေးမီကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် ယေရှု ပြန်လာမည်ဟု အခြားသူတစ်ဦးက ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ 2019 stattfinden werde. Viele Prophetie-Liebhaber versuchen, eine Verbindung zwischen den aktuellen Nachrichten und den biblischen Prophezeiungen herzustellen. Kark Barth ermahnte die Menschen, fest in der Schrift verankert zu bleiben, während er danach strebte, die sich ständig verändernde moderne Welt besser zu verstehen.
ကျမ်းချက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဘုရားသခင်အားသူ၏စရိုက်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အနှစ်သာရကိုဖွင့်ပြရန်ဖြစ်သည်ဟုသခင်ယေရှုသွန်သင်ခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည်ဘုရားသခင်အားအပြည့်အဝနှင့်နောက်ဆုံးဖွင့်ပြသောယေရှုကိုညွှန်ပြခြင်းအားဖြင့်ဤရည်ရွယ်ချက်ကိုပြီးမြောက်စေသည်။ ခရစ်တော်ကိုဗဟိုပြုသည့်ကျမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားဤရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဆက်လက်တည်ရှိရန်အထောက်အကူပြုမည်။
များစွာသောသူတို့သည်သမ္မာကျမ်းစာကဲ့သို့ရှေးဟောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်သည်ယနေ့ထိတိုင်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သမ္မာကျမ်းစာသည်ပုံတူပွားခြင်း၊ ခေတ်သစ်ဆေးပညာနှင့်အာကာသခရီးသွားခြင်းစသည့်ခေတ်သစ်အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမဖော်ပြထားပါ။ မျက်မှောက်ခေတ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသည်ကျမ်းစာခေတ်ကမရှိခဲ့သည့်မေးခွန်းများ၊ သို့တိုင်သမ္မာကျမ်းစာသည်ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်တွင်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာတိုးတက်မှုသည်လူ့အခြေအနေသို့မဟုတ်လူသားတို့အတွက်ဘုရားသခင့်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အစီအစဉ်များကိုမပြောင်းလဲစေကြောင်းသတိပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Die Bibel ermöglicht es uns, unsere Rolle im Plan Gottes zu verstehen, einschliesslich der kommenden Fülle seines Reiches. Die Schrift hilft uns, den Sinn und Zweck unseres Lebens zu erkennen. Sie lehrt uns, dass unser Leben nicht im Nichts endet, sondern auf ein grosses Wiedersehen zusteuert, bei dem wir Jesus von Angesicht zu Angesicht begegnen werden. Die Bibel offenbart uns, dass es einen Sinn im Leben gibt – wir sind geschaffen worden, um in Einheit und Gemeinschaft mit unserem dreieinigen Gott verbunden zu sein. Die Bibel bietet auch einen Leitfaden, um uns für dieses reiche Leben zuzurüsten (2. တိမောသေ 3,16-17). Sie tut dies, indem sie uns ständig auf Jesus hinweist, denjenigen, der uns reichlich Leben schenkt, indem er uns Zugang zum Vater ermöglichte (Johannes 5,39) und uns den Heiligen Geist sendet.
မှန်ပါသည်၊ သမ္မာကျမ်းစာသည်ထူးခြား။ အလွန်သက်ဆိုင်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရပါသည်။ ဒါတောင်မှလူအများကလက်မခံကြဘူး။ ၁၇ ရာစုတွင်ပြင်သစ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဗော်တဲယားကနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်းသမ္မာကျမ်းစာသည်သမိုင်းကြောင်းအမှောင်ထုထဲသို့ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းများသည်သမ္မာကျမ်းစာကိုအချိန်တိုင်းရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ယနေ့အချိန်အထိမူဘီလီယံငါးဘီလီယံကျော်ရောင်းချပြီးဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာရှိဗော်တဲယား၏အိမ်ကိုဂျီနီဗာကျမ်းစာအသင်းမှဝယ်ယူပြီးကျမ်းစာဖြန့်ဝေရေးဌာနအဖြစ်အမှုဆောင်ခဲ့သည်မှာရယ်စရာရောရယ်စရာပါ။ ဟောကိန်းများအတွက်အများကြီး!
အချို့သူများထင်နိုင်သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ရန်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုသခင်ယေရှု၏သမိုင်းကြောင်းသခင်အဖြစ်သိရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ပြုချက်များကယေရှုအတွက်လမ်းခင်းပေးသည်။ ပရောဖက်များခေါ်တော်မူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တမန်တော်ပေတရုမည်သို့ရေးသားခဲ့သည်ကိုသတိပြုပါ။
Nach dieser Seligkeit [wie sie in den vorausgegangen sieben Versen beschrieben wurde] haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist" (1. ဓာတ်ဆီ 1,10-12) ။
Petrus sagt, dass der Geist Christi (der Heilige Geist) die Quelle der Prophezeiungen ist und dass deren Zweck darin besteht, das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu vorherzusagen. Er impliziert, dass Sie, wenn Sie die Botschaft des Evangeliums gehört haben, alles gehört haben, was Sie über Prophezeiungen wissen müssen. Der Apostel Johannes hat hierüber in ähnlicher Weise geschrieben: «Bete vielmehr Gott an! Denn die prophetische Botschaft, die der Geist Gottes eingibt, ist die Botschaft von Jesus» (Offenbarung 19,10b, NGÜ).
ကျမ်းစာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားသည်မှာ - ယေရှုသည်ပရောဖက်ပြုချက်၏အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်များကသခင်ယေရှုသည်မည်သူဖြစ်ကြောင်း၊ သူဘာလုပ်ခဲ့သနည်း၊ အခြားမည်သည့်အရာများလုပ်ဆောင်မည်ကိုလည်းဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည်သခင်ယေရှုနှင့်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအသက်တာကိုအဓိကထားသည်။ ၎င်းသည်ပထဝီနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲများသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ကအချိန်မီကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်မဟုတ်။ သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း၏အုတ်မြစ်နှင့်နိဂုံးချုပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရခြင်းသည်နှစ်သိမ့်မှုများစွာပေးသည်။ ငါတို့သခင်သည်မနေ့၊ ယနေ့၊